Eksodus 32 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
32 Babona ke abantu ukuba lide eli xesha uMoses engade ehle entabeni.+ Baza ke abantu bahlanganisana ndawonye kuAron, bathi kuye: “Sukuma, usenzele uthixo oya kuhamba phambi kwethu,+ kuba lo Moses, le ndoda yasikhuphayo ezweni laseYiputa,+ ngokuqinisekileyo asazi ukuba kwenzeke ntoni kuye.” 2 Wathi uAron kubo: “Qhawulani amacici egolide+ asezindlebeni zabafazi benu, nezoonyana benu, nezeentombi zenu, niwazise kum.” 3 Bawaqhawula ke abantu onke amacici awayesezindlebeni zabo baza bawazisa kuAron. 4 Wayithabatha igolide ezandleni zabo, waza ngayo+ wenza umfanekiso otyhidiweyo wethole lenkomo ngesixhobo sokukrola.+ Baza bathi: “Nanko uThixo wakho, Sirayeli, okukhuphileyo ezweni laseYiputa.”+ 5 Akukubona oku uAron, wakha isibingelelo phambi kwalo. Ekugqibeleni wamemeza uAron wathi: “Ngumthendeleko kuYehova ngomso.” 6 Ngoko bavuka ekuseni ngengomso, baza benza iminikelo etshiswayo, basondeza imibingelelo yobudlelane. Emva koko abantu bahlala phantsi, badla, basela. Bandula ke basukuma ukuze bonwabe.+ 7 Wathi uYehova kuMoses: “Hamba, uhle, kuba abantu bakho owabakhuphayo ezweni laseYiputa bonakalisile.+ 8 Baphambuke ngokukhawuleza endleleni endabayalela ukuba bahambe ngayo.+ Bazenzele umfanekiso otyhidiweyo wethole lenkomo, baqubuda kuwo, babingelela kuwo besithi, ‘Nanko uThixo wakho, Sirayeli, okukhuphileyo ezweni laseYiputa.’”+ 9 Wahlabela mgama uYehova wathi kuMoses: “Ndisikhangele esi sizwana, uyabona, sisizwana esintamo-lukhuni.+ 10 Ngoko ke ndiyeke, uvuthe umsindo wam kuso ndize ndisitshabalalise,+ ndenze wena uhlanga olukhulu.”+ 11 UMoses wambongoza uYehova uThixo wakhe,+ wathi: “Yini na, Yehova, ukuba uvuthe umsindo wakho+ kubantu bakho obakhuphileyo ezweni laseYiputa ngamandla amakhulu nangesandla esomeleleyo? 12 Yini na ukuba amaYiputa+ atsho ukuthi, ‘Wabakhuphela ububi ukuze ababulalele ezintabeni, abatshabalalise bangabikho emhlabeni’?+ Buya ekuvutheni komsindo wakho,+ uzisole+ ngobu bubi nxamnye nabantu bakho. 13 Khumbula uAbraham, uIsake noSirayeli abakhonzi bakho, owazifunga ngokwakho kubo,+ wathi kubo, ‘Ndiya kuyandisa imbewu yenu njengeenkwenkwezi zasemazulwini,+ neli lizwe lonke ndilityumbileyo ndiya kulinika imbewu yenu,+ ilidle ilifa kuse kwixesha elingenammiselo.’”+ 14 Wazisola ke uYehova ngobubi awayethe uya kubenza ebantwini bakhe.+ 15 Emva koko wajika uMoses waza wehla entabeni+ enamacwecwe omabini eSingqino+ esandleni sakhe, amacwecwe lawo ebhalwe macala omabini. Ebhalwe ngapha nangapha. 16 Amacwecwe lawo ayengumsebenzi kaThixo, nombhalo lowo wawungumbhalo kaThixo, ukroliwe emacwecweni.+ 17 Wayiva uYoshuwa ingxolo yokukhwaza kwabantu, waza wathi kuMoses: “Kukho ingxolo yedabi+ enkampini.” 18 Kodwa wathi yena: “Asisandi sakuvuma kwabeyisayo,+Ingesiso nasandi sakuvuma kwaboyiswayo;Sisandi sakuvuma kumbi endisivayo mna.” 19 Wathi akusondela enkampini waza walibona ithole lenkomo+ kwanemingqungqo, wavutha umsindo kaMoses, waza ngoko nangoko wawalahla amacwecwe awayesezandleni zakhe, wawaphula emazantsi entaba.+ 20 Wandula ke walithabatha ithole lenkomo ababelenzile, walitshisa ngomlilo waza walityumza lada lacoleka laluthuthu,+ wasuka waluphosela emanzini+ waza wabaseza wona oonyana bakaSirayeli.+ 21 Emva koko wathi uMoses kuAron: “Senze ntoni na esi sizwana kuwe ukuba usizisele isono esikhulu kangaka?” 22 Wathi uAron: “Mawungavuthi umsindo wenkosi yam. Nawe uyabazi aba bantu, ukuba batyekele ebubini.+ 23 Bathe kum, ‘Senzele uThixo oya kuhamba phambi kwethu,+ kuba lo Moses, le ndoda yasikhuphayo ezweni laseYiputa, ngokuqinisekileyo asazi ukuba kwenzeke ntoni kuye.’ 24 Ngoko ke ndithe kubo, ‘Ngoobani abanegolide? Mabayiqhawule, bandinike.’ Ndayiphosa emlilweni kwaza kwaphuma eli thole lenkomo.” 25 Wababona uMoses abantu ukuba abalawuleki, kuba uAron wayebayekile abalawuleka+ baza bahlazeka kubachasi babo.+ 26 Wema uMoses esangweni lenkampu waza wathi: “Ngubani na ongakuYehova? Makeze kum!”+ Bahlanganisana kuye bonke oonyana bakaLevi. 27 Wathi kubo: “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Ngamnye kuni makabhinqe ikrele lakhe. Dlulelani kwisango ngesango lenkampu nize nibulale elowo umntakwabo, elowo idlelane lakhe, nalowo usenyongweni kuwe.’”+ 28 Benza oonyana bakaLevi+ ngokokutsho kukaMoses, kwaza kwawa ebantwini ngaloo mini malunga namawaka amathathu amadoda. 29 Wahlabela mgama uMoses esithi: “Zimiseleni namhlanje kuYehova,+ ukuba ngamnye wenu achase unyana wakhe nomntakwabo,+ ukuze anijizeke ngentsikelelo namhlanje.”+ 30 Kwathi ngengomso uMoses wathi ebantwini: “Nonile nina—nenza isono esikhulu,+ ngoku ke ndonyuka ndiye kuYehova. Mhlawumbi ndingenza imbuyekezo ngenxa yesono senu.”+ 31 Ngoko uMoses wabuyela kuYehova waza wathi: “Awu, esi sizwana sonile, senza isono esikhulu, sazenzela uthixo ngegolide!+ 32 Khawusixolele ngoko isono saso,+—ukuba akunakuba njalo, nceda undicime,+ encwadini yakho+ oyibhalileyo.” 33 Noko ke, wathi uYehova kuMoses: “Ubani osukuba onile kum, ndiya kucima yena encwadini yam.+ 34 Ke ngoko, hamba, ubakhokelele abantu kuloo ndawo ndathethayo ngayo kuwe. Yabona! Ingelosi yam iya kuhamba phambi kwakho,+ yaye ngemini yokohlwaya kwam ngokuqinisekileyo ndiya kubohlwaya ngenxa yesono sabo.”+ 35 Wasuka uYehova wabazisela isibetho abantu ngenxa yethole lenkomo elo balenzayo, elenziwa nguAron.+